5 Tiyaatar caanka In Europe | Save A Train Travel Europe
Home > safarka Europe > 5 Tiyaatar caanka In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 14/02/2020)
Tiyaatar caanka ah ee Europe waxaa leh tolmo wanaagsan galay dhar dhaqanka Yurub. tiyaatarada caanka ah ee Europe idiin Yaboohi qaab aan caadi ahayn. Waxay kaa tegi doonaan adigoo kiciyey, dhaqaaqay iyo spellbound! dabiiciga ah ee fanka waa soo Dagdagaysa iyo hal-abuur dushaan ka jirto. widhwidha Kuwani ciyaaray ku nool yihiin oo kaliya in xusuus our. tiyaatarada caanka ah ee Europe abuuro dareen gaar iyo failed. Waa daqiiqad kooban in la wadaago waqti, iyo waxaad u baahan doontaa in bask iftiinka ay siyasad.
Kuwani waa qaar ka mid ah Siiyay Goolhaye sare oo ka mid ah tiyaatarada caanka ah ee Europe ugu our, si fudud waa-arka, waayo, lover dhaqanka:
Waxa ay u muuqataa macquul ah oo kaliya in aan bilaabi doono Italy, saamayn badan heysteen on tiyaatarada caanka ah ee Europe. The Teatro alla Scalla waa guriga caansan dunida ee reer Talyaani Opera ah.
Inta badan oo ka mid ah kuwii gabayaaga weyn ee la soo dhaafay, ka badan laba boqol oo sannadood ee la soo dhaafay, halkan sameeyaa. operas badan oo caan ah ayaa ay wax soo saarka ugu horeysay halkan sida Othello, Nabucco by Verdi iyo Madame Balanbaalis by Giacomo Puccini.
tiyaatarka Tani waa grand iyo qurux. Waxay leedahay madxafka oo ah meesha aad gudidoodu kartaa meelaha gaarka ah oo aan sida caadiga ah u furan yahay dadweynaha. auditorium The weyn waxaa la dhisay ka qoryo iyo waxa la daboolay maro jilicsan decadent cas. Waxaa la shiday by dheertahey a crystal Bohemian.
2. Globe Tiyaatarka The, London
Tiyaatarka Globe ayaa waxaa loo yaqaan Shakespeare Globe. Taageerayaasha kacsi of Bard waa booqo tiyaatarka caan this ee Europe. shuqullada William Shakespeare muujiyaan faham qoto dheer ee dabeecadda aadanaha. Uu jiidanayaa shaqada dhageystayaasha. Uu xad sare oo ah luqadda Ingiriisiga ayaa ruwaayado iyo gabayo Xisbiyada Mucaaradku gogo 'oo hanad.
Haddii aad tahay lover ah ee Shakespeare, tani waa xaqiiqo ah rugeedka si ay booqasho! Rabbiga midiidinnadiisa Ragga waxaa hoos u gubay 1613. dib u dhiska casriga ah in u taagan in ay meel maanta waa meel u dhow meesha asalka ah.
Kaalay in this saddex-story, U furan-hawada Amphitheatre inay ku raaxaystaan ​​plays. Ka qayb siminaaro. Fadhiiso-in on muxaadarooyin iyo martigeliso akhrinta. Waxaa jira barnaamij si fiican u soo qayb galay masrixiyada sannadka oo dhan oo ay tahay waajib ah on liiska tiyaatarada caanka ah ee Europe.
3. Paradis Laatiin, Paris
Paradis Latin waa cabaret goobta a casriga ah in uu yahay bedelka ah ee asalka ah Latin Tiyaatarka. Tiyaatarka Latin ayaa waxaa asal u wakiishay by kale oo aan ahayn Napoleon Bonaparte ee 1800 ma jiro.
dhismayaasha badan oo gubay inta lagu guda jiro waqti in. Tan waxaa ku jira this mid ka mid ah. Caan ku tahay in ay glitz iyo kartina, sidaa darteed haddii aad raadinayso jiliinkii, waxaad ka helaysaan at a bonafide PSG cabaret show. In lala qaab fiican cabaret, waxa kale oo aad arki kartaa ciyaarta dabaasha iyo trapeze gaar ah falalka.
Volkstheater ee Vienna waa a hortiisa qurux badan si ay bal eeg. Waxa marka hore la furay 1889. Waa mid ka mid ah ugu weyn ee noociisa ah oo dhan dalalka dunida German-ka hadlaya oo waa a waa in uu arko.
Dhisay sida dhigiisa badan oo ay heli karaan Burgtheater ah, waxaa la ah goobta doortay waqtiga bulshada sare laakiin farshaxanka waa qof walbaa ku raaxaysto. Bilawga tiyaatarka this ammaanta badan, xooga la saaray qorayaasha Austria. maanta, waxaad noqon kartaa markhaati waajihid ballaaran oo uu helay caalami.
Caksiga Bar waa dabaqa sare ee tiyaatarka. Waa meel go'aansatay rasmi ah. Waxaa halkan waa in aad dhegaysan kartaa music daarmayaay'e, raaxaysan dhacdooyinka kooxda iyo sidoo kale akhriska iyo bandhigyo casriga ah.
5. Tiyaatarka Qaranka, Prague
Waxaa la yaab ma laha in Masraxa Qaranka ee Prague ayaa lagu naaneeso, Golden Chapel The. Waxay u taagan tahay kibir oo dhan ay Neo-Renaissance ammaan. Waxaad dareemi doontaa sida aad qayb ka mid ah naftaada ku abtirsan waa marka aad booqato tiyaatarka caan this ee Europe.
Tiyaatarka Qaranka waa hodan ku ah taariikhda laakiin dhismihii asalka hoos u gubay 1881. quruun dhan wada xogagga oo lagu taageerayo oo ka mid ah fanka. Waxay ka qayb qaatay waxaa lagu dhiso, oo u haysta sida ay mar ahaa.
maanta, kaalay oo arag kala duwan oo cajiib ah ee ballets, Riwaayado, iyo operas in loo Waxyoodo ahayn iyo ku farxaan, iyo dabcan, qaadi gaadiid la Save A tareenka oo ay halkaas ka heli!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Tiyaatar caanka In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-theatres-europe%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#tiyaatarka ParadisLatin performingarts TeatroAllaScala tiyaatarka TheGlobeTheatre tareen safarka Volkstheater